“Raharaha Kidnapping Arnaud sy Annie” : 30 tamin’ireo 75 voarohirohy no niatrika ny fitsarana omaly | NewsMada
“Raharaha Kidnapping Arnaud sy Annie” : 30 tamin’ireo 75 voarohirohy no niatrika ny fitsarana omaly
Raikitra tsy raikitra, efa herintaona sy tapany aty aoriana! Saika nahemotra indray ny fitsarana ny raharaha fakana an-keriny an’i Arnaud sy Annie tany Toamasina, omaly teny amin’ny fitsarana Anosy.
Saika nisy indray ny sakana noho ny fitokonan’ireo mpitsara mpanampy ao amin’ny fitsarana ady heloka bevava (CCO) omaly iny. Ireto farany izany nanararaotra ny fisian’ity raharaha goavana ity nanehoana ny fitakiany ny tambin-karaman’izy ireo taona 2012 no ho mankaty.
Ny hariva anefa, raikitra ihany ity fitsarana ny raharaha fakana an-keriny ity. Araka ny vaovao teny an-toerana, olona 30 amin’ireo 75 tafiditra amin’ity fakana an-keriny ity no niatrika fitsarana. Nisy tamin’ireo, raha ny fanononana teny aloha ny polisy maromaro, mpandraharaha ny fonja, mpamily ny fiara nitondra an’i Arnaud sy Annie. Anisan’ny voatonona ihany koa ramatoa Stéphanie. Ity farany izay anisan’ny atidoha tamin’ity raharaha ity.
Nisy ihany koa ny mpitsara tafiditra tamin’ity fakana an-keriny ity izay voatonona ihany koa ny anarany saingy tsy teny an-toerana ny tenany. Marihina fa efa nisy olona 40 nahazo fahafahana vonjimaika tamin’ity raharaha ity. Nisy ny efa naiditra am-ponja vonjimaika tany Tsiafahy, Arivonimano, Antanimora…
Nifarana ny hariva ny fihainoana ny ampahany voalohany tamin’ireto olona ireto. Hitohy, anio, izany raha tsy misy ny fiovana. Tsy mbola voaresaka ihany koa ny momba ireo basy Kalachnikov miisa efatra niaraka tamin’ny bala marobe sarona nandritra ny fikarohan’ny mpitandro filaminana ireo mpanao kidnapping tany Toamasina. Mbola misy ihany ny olona karohina amin’ity fakana an-keriny ity. Andrasana anio ny tohin’ny fitsarana ny raharaha.